Mgr Rabenantoandro Ludovic : “Afaka misokatra ny sekoly katolika fa… misy fepetra arahina” | NewsMada
Mgr Rabenantoandro Ludovic : “Afaka misokatra ny sekoly katolika fa… misy fepetra arahina”
Afaka miditra amin’ny taom-pianarana vaovao ny sekoly katolika eto amin’ny disoezin’Antananarivo rehefa tafapetraka avokoa ny fepetra rehetra. Iarahan’ny ray aman-dreny sy ny talen-tsekoly ny fanapahana ny daty hidirana sy ny saram-pianarana.
Tapaka, nandritra ny fivorian’ny talen-tsekoly sy ny mpiandraikitra ny fanabeazana ao amin’ny diosezin’Antananarivo, fa afaka miroso amin’ny fampianarana ny sekoly katolika saingy misy ny fepetra tsy maintsy arahina mialoha izany. Voalohany, ny fananganana komity mpanara-maso ny fahasalamana any an-tsekoly, mila manomana toerana manokana handraisana ny mpianatra na ny mpanabe tratry ny tsy fahasalamana ka ahina ho pesta ny sekoly. Manampy ireo, apetraka ny fitaovana rehetra ilaina raha miseho tampoka ny tsy fahasalamana any an-dakilasy ary hifandray tsy tapaka amin’ny tomponandraikitra amin’ny fahasalamana sy ny ray aman-dreny izy ireo hilaza ny tranga misy.
Misy koa ny toromarika ho an’ny ray aman-dreny, tsy tokony handefa ny zanany any an-dakilasy izy ireo raha tsapany fa tsy salama na inona na niona soratraretina eo amin’ilay ankizy. Mila entina any amin’ny mpitsabo ny zaza tsy salama. “Rehefa tapafetraka sy voarain’ny ray aman-dreny ireo fepetra ireo, afaka misokatra mandray mpianatra ny sekoly na anio ihany aza », hoy ny vikera jeneralin’ny diosezin’Antananarivo misahana ny fanabeazana, Rabenantoandro Ludovic, omaly teny amin’ny Falda Antanimena.
Tsy manohitra ny fanjakana velively ny sekoly katolika fa manome tanana azy ireo momba ny ady amin’ny pesta. Tonga teny Antanimena nizara ny tsara ho fantatra ny talen’ny fampiroboroboana ny fahasalamana, ao amin’ny minisiteran’ny Fahasalamana, ny dokotera Rakotoarivony Manitra, nilaza ny fepetra tokony harahina raha hiverina ny fampianarana. Efa nanome tohana koa ny Unicef amin’ny fanomezana ny afisy fanentanana hapetraka any an-tsekoly ho an’ny mpianatra sy ny mpanabe ary ny ray aman-dreny.
Hiara-hiasa amin’ny CSB ao an-toerana
Misy ny sekoly efa manana dispensaire satria miankina amin’ny fiangonana, hiara-hiasa amin’ny tomponandraikitry ny CSB eo an-toerana koa izy ireo. Iarahan’ny talen-tsekoly sy ny ray aman-dreny ny fanapahan-kevitra horaisina momba ny fidirana sy ny saram-pianarana, hoy ny fanazavana.
Ankoatra izay, misy ny fanamafisana ny vavaka fanao isan’andro hampitodika ny isam-batan’olona amin’Andriamanitra. Hanatanteraka vavaka iraisana ny ao amin’ny disoezy eto Antananarivo ny zoma ho avy izao.
Momba ny saram-pianarana, malalaka ny sekoly tsirairay handray ny fanapahan-kevitra mifandraika amin’izay heverina fa mety manoloana ny zava-misy iainana.